Beguines - WRSP
Womenmụ nwanyị na Okpukpe na Ime Mmụọ nke Worldwa
Ndị ime mmụọ na ọhụụ
Saịtị & Omume njem uka gburugburu ụwa
Mgbapu okpukpe na nke ime mmụọ na ihe nkiri eserese
Òtù Na-ahụ Maka Mmasị na Ndị Nkwado nke Marian
Yoga na World Religions na Ime Mmụọ
Russia na ọwụwa anyanwụ Europe
Projects Community Community
Ntuziaka Onye edemede
Ajụjụ ọnụ WRSP Forum
Ndepụta Ụlọ Ọrụ Ihe Ndeba
Tanya Stabler Miller
1211: James nke Vitry hapụrụ Paris gawa obodo nke Oignies, ebe ọ zutere ma mepee ọbụbụenyi ime mmụọ chiri anya ya na nwanyị nwanyị okwukwe dị nsọ nke Mary nke Oignies (1177–1213).
1213: Mary nke Oignies nwụrụ.
1215: Anọ nke Lateran Council mere.
1216 (July): James nke Vitry rịọrọ ma nata ikike n'aka Pope Honorius nke Atọ maka ndị nwanyị mulieres religiosae (ụmụ nwanyị okpukperechi) na diọcese Liège, alaeze France, na Alaeze Ukwu German ibikọ ọnụ na ịchụso ndụ nke ịdị ọcha na ekpere. .
1216 (Mgbụsị akwụkwọ): James nke Vitry mezuru Ndụ nke Mary nke Oignies, nke jere ozi dị ka ihe nlereanya maka obodo ụmụ nwanyị ji okpukpe kpọrọ ihe n'ógbè ahụ.
1233: Pope Gregory IX nyere Gloriam virginalem, nke gbasapụrụ nchebe papal na “ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke” na Germany ma mesịa diocese nke Cambrai. Iwu nke ụlọ ikpe nke Cambrai hiwere obere oge mgbe nke ahụ gasịrị.
1234: E guzobere iwu aghụghọ nke Elizabet na Ghent; amamikpe nke ikpe nke Louvain guzobere otu afọ ahụ.
1239: E guzobere amamịghe nke Elizabet na Valenciennes.
1240: James nke Vitry nwụrụ.
Ca. 1260: E guzobere Saint Catherine beguinage na Paris.
1274: Second nke Lyons megharịrị ka Mgbakọ nke anọ nke Lateran mechie iwu nke iwu okpukpe ọhụrụ.
1310: Marguerite Porete nwara ma gbue ya.
1311: Kansụl nke Vienne, ebe ndị isi ụka katọrọ ọnọdụ aghụghọ, mere. Pope Clement nke V mechara wepụta iwu abụọ na-emegide iwu (Mgbe de quibusdam na Ad nostrum)
1314: Pope Clement V nwụrụ.
1317: Iwu mgbochi Beguine Vienne, Mgbe de quibusdam na Ad nostrum, ka Pope John XXII kwusiri ma kwuputa ya.
1320: Pope John XXII nyere Mgbe de mulieribus, na-achọ ịkọwapụta ebumnuche ebumnuche nke Iwu Vienne
1328: Nnyocha ndị Episcopal mere na nhụsianya nke ugwu France na Mba Ndị Dị n'Ebe Dị Ala na-ejedebe na njedebe nke ụlọ ọrụ ndị a.
1370s – 1390s: N'ime ime obodo, nchọpụta oge ụfọdụ na beguines na obodo German mere ka mmadụ ghara ịchekwa okwu a "beguine" na mpaghara ụfọdụ. Obodo ndị nwanyị na-enwe nkwanye ùgwù nọgidere na-enwe ọganihu n'okpuru aha na njikọ dị iche iche.
1405: A chụpụrụ Beguines n’obodo Basel.
1545–1563: Kansụl nke Trent mere.
1566: Pope Pius V nyere Ndi ekpemagu, na-achọ ka ụmụ nwanyị nile na-ekpe okpukpe n'okpukpe ọ bụla debe ogige dị nsọ.
1566: Ntughari Dutch malitere, na-ewepụta akara ngosi akara ngosi nke mebiri ma ọ bụ bibie iwu ndị niile na Netherlands.
1585: E weghachiri ọchịchị Spanish, nke Katọlik na mpaghara ndịda Netherlands, na-eduga na mweghachi nke njehie mpaghara ndị ahụ.
1794: Njikọ aka nke mba ndị dị ala site na French Republic mere, na-eduga na njide nke ihe aghụghọ.
1831: E guzobere Alaeze nke Belgium, ma nwekwaa mmalite nke mmasị na beguinages dị ka akara nke ihe nketa Belgium.
1998: Edebere iwu iwu ụlọ ikpe iri na atọ na ndepụta UNESCO nke World Heritage.
2013: Onye ikpe azụ ikpeazụ, Marcella Pattyn, nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri itoolu na abụọ.
FOUNTER / GROUP HISTORY
Ndi Beguines enweghi onye choputara ma obu ebe o sitere ma nweghi iwu okpukpe a ma ama. Ná mmalite narị afọ nke iri na atọ, obodo ndị beguine pụtara, na-adịkarị n'otu oge, n'akụkụ dị iche iche nke ugwu Europe, ọkachasị mba ndị dị ala, mpaghara gụnyere akụkụ nke oge ugwu France, Belgium, na Netherlands nke oge a (Simons 2001). [Foto dị n'aka nri] Otu n’ime oge izizi nke okwu ahụ bụ “beguine,” nke a hụrụ na okwuchukwu onye ụkọchukwu oge ochie James nke Vitry (ihe dị ka 1160 / 1170–1240), gosiri na okwu a bidoro dịka otu n’ime ọtụtụ okwu mkparị a tụbara na ya. ụmụnwanyị ndị, na-ahapụ ụzọ nke ụwa nke alụmdi na nwunye, raara onwe ha nye ndụ nke ịdị ọcha na ikpe ekpere. Ndị ọkà mmụta kwenyere na okwu a na-enweta site na mgbọrọgwụ "begg," nke pụtara "ịtamu," na-atụ aro na ejiri akara ahụ mee akaje na onye na-eme mkparị, ikekwe na-ewe iwe, nsọpụrụ (Simons 2014). Mgbe ahụ, onye beguine bụ nwanyị na-egosipụta mmụọ nsọ nsọ Chineke karịrị ihe mmadụ tụrụ anya ya n'aka ndị nkịtị. Ọ bụ njirimara nke dabere n'ọtụtụ ụzọ na nnabata ọha na eze dịka njirimara onwe.
Ndị ụkọchukwu nke oge ochie bụ ndị chọrọ ịkọwa na kwalite ihe ha lere anya dị ka ngosipụta pụrụ iche nke okwu mmụọ n'etiti ụmụ nwanyị maara nke ọma izere okwu beguine, n'ihi echiche ya na-ezighi ezi, na-ahọrọ onye ọhụụ na-enweghị atụ mara mma mulieres religiosae (ụmụ nwanyị okpukpe). Otú ọ dị, ka oge na-aga, ndị na-ekiri ihe mgbe ochie, na ụmụ nwanyị n'onwe ha, nakweere "beguine" dị ka akara na-egosi nhọrọ (nke a na-ebute site na uwe na omume a na-ahụ anya) iji bie ndụ nke ịdị ọcha na ọrụ na ụwa na-abụghị usoro okpukpe, ma n'otu n'otu ma ọ bụ n'ìgwè nke ụmụ nwanyị yiri mmụọ. Ka ọ na-erule etiti narị afọ nke iri na atọ, nzukọ nke ndị nwanyị ji obi ha niile na-efe ofufe, site n'enyemaka, ma ọ bụ nrụgide, nke ndị isi obodo na ndị ụka, malitere igosi obodo ha dị ka ụlọ ọrụ gọọmentị, na-eduga na ntọala nke ọtụtụ narị ụlọ beguine ma ọ bụ aghụghọ, ọtụtụ n'ime nke na-adịgide taa dịka ebe nketa ọdịbendị (McDonnell 1954; Simons 2001).
E nwere ọtụtụ ihe kpatara ụmụ nwanyị ji soro ụzọ ndụ okpukpe na-eduzi onwe ha. Ọ bụ ezie na ndị ọkà mmụta na-ekwu na arịrịọ nke nhọrọ beguine bụ enweghị ohere na ndị ụkọchukwu ma ọ bụ enweghị nhọrọ alụmdi na nwunye, agụmakwụkwọ na-adịbeghị anya na-amata na ụmụ nwanyị ndị a na-emegharị site na otu mmụọ ime mmụọ nke kpaliri ndị nwoke dịka St. Francis nke Assisi (d. 1226 ). Ọchịchọ ha bụ i toomi Jizọs na ndịozi ya (vita apostolica, ya bụ, ndụ ndịozi) (Böhringer 2014). Ihe gbara ya gburugburu bụ isi. N’ime narị afọ nke iri na abụọ na nke iri na atọ, enweghị ike ịha nhata n’ọha na eze n’obodo ndị na-eto eto n’oge ochie Europe. N'otu oge ahụ, mgbalị ndị mọnk mere ka ha gbanwee iwu okpukpe dị ugbu a na ime ka ndị nkịtị na-eme ka ndị nkịtị na-akpali ndị ochie ka ha chọọ nkuzi okpukpe ka mma, ọkachasị n'ụdị nkwusa, na ịchọta ụzọ iji sụgharịa ebumnuche ime mmụọ ha n'ime ụwa (Grundmann) 1995). Ogbenye obodo na enweghị ike mere ka ndị nwoke na ndị nwanyị mgbe ochie nabata ọrụ ebere na ọrụ dị ka ebumnuche nke mmụọ, na-eduga na "mgbanwe ọrụ ebere" na narị afọ nke iri na atọ ka e guzobere ọtụtụ narị ụlọ ọgwụ na leprosariums na Europe dum iji nye ndị ogbenye na ndị ọrịa nsogbu. (Davis 2019). Ndị obodo izizi edere ede na-esonye, ​​ma ọ bụ na-eto site na, ụlọ ọrụ ndị a (Simons 2001).
Nhọrọ beguine na-agbanwe agbanwe, dị ike, ma na-anabata mgbanwe ọnọdụ onwe onye yana mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze (Miller 2014; Deane 2016). Beguines dị mfe, ma ọ bụghị nkwanye ugwu, nkwa nke ịdị ọcha, nke nyere ụmụ nwanyị ohere ịhapụ ndụ beguine n'oge ọ bụla iji lụọ. Ntughari adịghịkwa ama ogige, ebe ọ bụ na ọkpụkpọ ime mmụọ ha na-adabere na ọha mmadụ. [Foto dị n'aka nri] N'ikpeazụ, ndị beguines ekweghị nkwa ịda ogbenye, ọ bụ ezie na ọtụtụ nakweere ịda ogbenye dị ka akụkụ nke ọnọdụ ime mmụọ ha. Obodo Beguine achọghị ndị bi na ha ịhapụ ihe onwunwe nke ha, nke mere ka ụmụ nwanyị jiri akụ ha kwado onwe ha na ndị ọzọ (De Moor 2014). Njikwa ihe onwunwe nyekwara ụmụ nwanyị nnwere onwe ịhapụ obodo na enweghị nnukwu ego nke ego ha. Akụkụ ndị a nke ndụ beguine na-akọwa oke okwu ya, na-adịgide adịgide ma mgbe ụfọdụ na-ahapụ ụmụ nwanyị ahụ maka ebubo nke ihu abụọ.
Obodo izizi nwere ike ịmata nke mulieres religiosae bidoro na mbido narị afọ nke iri na atọ na diọcese Liège ma hiwe isi n'ebe nwanyị na-adọrọ adọrọ nke a maara dịka Mary of Oignies (1177-1213). Mary nwetara otuto zuru oke site n'aka onye ụkọchukwu James nke Vitry, bụ onye, ​​mgbe ọ nụrụ banyere aha nsọ nke Meri, kọrọ na ọ hapụrụ agụmakwụkwọ ya na Paris iji biri na Oignies, bụ ebe ọ ghọrọ onye na-ede akwụkwọ mgbe niile na isi obodo Augustine nke St. Nicholas. Na James, Meri nwetara onye nkwado ndị ụkochukwu nke nwere ike ịga n'ihu na-arịọ ndị popu n'aha mulieres religiosae na mpaghara ahụ. James, n'aka nke ya, kwuru na Meri nyere ya nkasi obi na mmụọ nsọ ma nyere ya aka ịghọ onye nkwusa ka mma (Coakley 2006). N’oge na-adịghị anya ka Mary nwụsịrị na 1213, James dere nke Meri ndu, ịrara ọrụ ahụ nye Bishọp Fulk nke Toulouse (c.1155-1231), onye bịara Liège mgbe ndị jụrụ okwukwe chụpụrụ ya na diọcese ya. Na Vita e gosipụtara Meri, tinyere ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ na diocese ahụ, dị ka ụdị nke usoro ọdịnala, nraranye nke sacrament, na nrube isi nye ndị ụkọchukwu oge mgbe ndị jụrụ okwukwe na ndị ọzọ na-ekwenye ekwenye na-ajụ ajụjụ maka ịdị nsọ na ikike nke ndị isi ụka (Elliott 2004) . Ndụ Meri, nke edere na James nke ọma Vita ma cheta ya na ulo akwukwo, o yiri ka o sitere n'ike mmụọ nsọ ndi nwanyi nwere uche di na dicocese nke Liège ichikota na obodo ndi raara onwe ha nye oru na ekpere (Simons 2014).
Ọ bụ ezie na James na ụfọdụ ndị ha na ya dịkọrọ ndụ kwalitere mulieres religiosae dị ka ụdị nke mmụọ nsọpụrụ, ụmụ nwanyị enweghị ikike, nchedo, yana ogige kpaliri nchegbu banyere aha ha na nchekwa anụ ahụ. Na nzaghachi, ndị na-akwado ụkọchukwu rụrụ ọrụ iji nweta ihe ùgwù pụrụ iche nke papal iji mee ka ụmụ nwanyị zukọta na obodo ebumnuche etinye aka na-arụ ọrụ na ekpere (McDonnell 1954; Dor 1999). Na 1216, James nke Vitry kọrọ n'akwụkwọ ozi o degaara ndị enyi ya na ya nwere ihe ịga nke ọma n'inweta ikike site n'aka Pope Honorius III maka mulieres religiosae nke diọcese Liège, yana France na Alaeze Rom Dị Nsọ, ka ha biri ma gbaa ibe ha ume n’ọchịchọ nke ime mmụọ ha. Ndi mmadu nabatara na May 1233, mgbe Pope Gregory IX nyere oke ehi Gloriam virginalem, nke nyere nchebe nye ụmụ nwanyị ọ kpọrọ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke (kọntaktị kọntinent) na Germany. Fivebọchị ise ka nke ahụ gasịrị, popu gbatịrị otu ụdị nchedo ahụ maka “ụmụ agbọghọ” nke diọcese Cambrai (Simons 2001). N'ụzọ dị oke mkpa, Gloriam virginalem kwusiri ike na nkwa ụmụ nwanyị na-edebe ịdị ọcha ma ọ bụghị iji beguine mee ihe. Ọzọkwa, oke ehi enyeghị nkọwa doro anya ma ọ bụ nnabata nke mgbagwoju anya nke ihe a ga-emecha mara dị ka ọnọdụ beguine, nke dọtara ndị inyom di ha nwụrụ dị ka ndị na-alụghị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụghị naanị itinye aka na ịdị ọcha. O sina dị, na ndabere nke Gloriam viginalem, ndị isi okpukpe na nke ndị ọchịchị n’obodo ndị dị na mgbago ugwu France, Belgium, na Netherlands nyere nkwado iwu maka nnọkọ ime obodo nke ụmụ nwanyị ndị ji ezi obi kpọrọ ihe, n’ọtụtụ mgbe, na-eme ka ndị obodo mara ọkwa obodo ndị dịbu adị. N’ụzọ dị mkpa, ọ bụ n’oge a ka ndị ọchịchị obodo bidoro na-ezo aka na “beguines” na eserese na ụdị akwụkwọ iwu ndị ọzọ, na-egosi na okwu a abụrụla aha asụsụ ụmụ amaala na-anabata nke ụmụ nwanyị na-ekpesi ike. N'ezie, ọ bụ ezie na ọ dịghị mgbe ọ kwụsịrị ịkọwa ihe na-adịghị mma, site na narị afọ nke iri na atọ, okwu ahụ aghọwo ihe a na-emekarị na akwụkwọ gọọmentị gbasara obodo ndị dị otú ahụ (Simons 2014).
A na-enyocha Beguines na ndị ọzọ nwere nchegharị na Second Council of Lyons (1274) mgbe ndị isi ụka, na-ekwu ọtụtụ okwu, megharịrị iwu nke anọ nke Lateran Council (1215) banyere iwu nke iwu okpukpe ọhụrụ (More 2018). N'ezie, ndị beguin ahụ ekwetaghị ọkwa nke usoro iwu okpukpe, isi okwu nke ndị isi obodo kwenyere na ha gụpụrụ obodo ha na iwu a. Ka o sina dị, na mkpesa a degaara Pope Gregory IX na nkwadebe maka Council nke Abụọ nke Lyons, Frisar Franciscan na ọkà mmụta okpukpe Gilbert nke Tournai (1200–1284) mere mkpesa kpọmkwem banyere beguines, na-ekwu na ụmụ nwanyị dị otú ahụ zere ọdịiche dị n'etiti canonical n'etiti "okpukpe na nkịtị , ”Ebe ọ bụ na ha abụghị ndị nọn ma ọ bụ nwunye. Ọzọkwa, Gilbert kwupụtara nchegbu banyere omume mmụọ ime mmụọ na-eduzi ndị aghụghọ, na-azọrọ na ụmụ nwanyị nwere nsụgharị Akwụkwọ Nsọ na-ezighi ezi, bụ nke o kwuru na ha na-agụkọ. N'ụzọ doro anya, ọ bụ ezie na ndị na-akwado beguines toro aha ụmụ nwanyị maka ikpekọ ekpere na agbamume, ndị ụkọchukwu ndị ọzọ nke oge ochie gosipụtara nchegbu na omume ndị dị otú a nwere ike iduga na nduhie na nkuzi nkuzi (Miller 2007).
Agbanyeghị nkatọ nke Gilbert, a manyere ndị beguine conven na aghụghọ iji gbasaa mgbe Council nke Abụọ nke Lyons, ọbụlagodi Kansụl nyere iwu ka ndị ọzọ na-ezighi ezi, ndị otu nchegharị gbasaa. N'agbanyeghị nke ahụ, nhọrọ beguine ahụ ka na-arụ ụka. Dika oke mmadu choro ibi n’uwa ma n’uzo nke (kariri nke oma) kari otutu ndi mmadu (ma obu ma obu Chineke), ihe ndi ozo choro ka ndi mmadu ghara iju ha anya. Fọdụ ndị sị na ha ji okpukpe kpọrọ ihe were iwe maka itinye aka n'ọkwa "okpukperechi" na-ejighi itinye aka na iwu, ebe ụfọdụ ndị otu laity were iwe maka ịjụ di beguine maka ịlụ di na nwunye yana ịkwụ ụtụ isi ụfọdụ. Ebe ọ bụ na a na-ahapụ ndị beguines ka ha nwee ike ịnwe ihe onwunwe ha ma ọ bụ hapụ ndụ aghụghọ iji lụọ, ụfọdụ ndị na-ekiri ihe na-ajụ izi ezi nke ọrụ ha, na-atụ aro na ụmụ nwanyị na-ebi ndụ aghụghọ iji zere alụmdi na nwunye na ibu ọrụ ezinụlọ ma ọ bụ dị ka ihe mkpuchi maka mmekọahụ rụrụ arụ. . Ọzọkwa, ebe ọ bụ na a na-akpọkarị beguines aha dị ka “ụmụ nwanyị ji okpukpe kpọrọ ihe,” a na-ebokarị ha ebubo nganga ime mmụọ na ihu abụọ. Ndị nkatọ nke beguines, dị ka William nke St. Amour (1200-1272) na Gilbert nke Tournai, dọrọ aka ná ntị ugboro ugboro na ndị inyom a nwere ike iweta ndị nkịtị, bụ ndị ha na ha na-akpakọrịta mgbe niile, na njehie (Miller 2014).
Na 1311, ndị ọrụ chọọchị gbakọtara na kansụl chọọchị dị na Vienne iji tụlee, n’etiti ọtụtụ okwu ndị ọzọ, ajụjụ banyere ozizi nduhie na nke adịgboroja, na-emesịa nye iwu abụọ. ” Iwu mbụ, nke a maara dị ka Mgbe de quibusdam mulieribus (Banyere ụfọdụ ụmụ nwanyị), nke lekwasịrị anya na ọnọdụ aghụghọ ahụ, kwuru na beguines rụrụ ụka ma kwusaa banyere Atọ n'Ime Otu na isi ihe dị nsọ, na-eduga ndị ọzọ na-akpafu n'echiche ha heterodox banyere isiokwu nke okwukwe na sacrament. N'ihi ọrụ ndị a e boro ha, iwu ahụ kwuru na “e kwesịrị ịmachi ọnọdụ beguin kpamkpam ma kagbuo ya kpamkpam.” Iwu nke abụọ, Ad nostrum, depụtara “njehie” asatọ ndị a na-azọrọ na ndị aghụghọ na ụmụ nwoke ibe ha, ndị a na-akpọ beghar, bụ ndị iwu ahụ mejupụtara bụ “òtù ịkpa arụ” dị ka iwu ahụ si dị. Kpọmkwem, Ad nostrum kwuru na ọ bụghị nanị na beguines ka ejikọtara ya na ndị na-arịọ arịrịọ (a na-enyo enyo) ma na ha so n'òtù ịjụ okwukwe a haziri ahazi nke kwenyere na mkpụrụ obi mmadụ nwere ike izu oke nke na ọ nwekwaghị mkpa maka iwu omume. Dị ka Na quibusdam, Ad nostrum katọrọ ọnọdụ beguine mana ezubere iche maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke na ala German (Makowski 2005).
Ọnwụ Pope Clement nke V na 1314 (p. 1305–1314) gbadara mgbasa nke iwu Vienne, nke emechara ma wepụta na 1317 site n'aka onye nọchiri Clement, Pope John XXII (p. 1316-1334). Iwu ndị Vienne kesara ọgba aghara na esemokwu ozugbo maka ndị isi ala na nke ụka, ebe ọ bụ na o doghị anya etu ha si tinye ụmụ nwanyị na mpaghara ha aka (Makowski 2005; Van Engen 2008; Miller 2014). O doro anya na ihe kpatara esemokwu abụọ ahụ bụ Mgbe de quibusdam, nke a na-agụ dị ka nkatọ blanket nke ọnọdụ beguine tupu ọ gwụchaa na a chọrọ ịmata "ụzọ mgbapụ" na-enye ohere ka "ụmụ nwanyị kwesịrị ntụkwasị obi" bi "n'eziokwu n'ụlọ ha," na-akọwaghị nke ụmụ nwanyị kwesịrị iwere dị ka "ndị kwesịrị ntụkwasị obi" ma ọ bụ otu ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị inyom a na ebumnuche iwu ahụ.
Fọdụ ndị ọka iwu so na ya rụrụ ụka Mgbe de quibusdam etinyere ndị bi na congu ma ọ bụ beguinages beguinages na "ụzọ mgbapụ" metụtara ụmụ nwanyị ndị na-ebi ndụ dị ọcha na nzuzo n'ụlọ ha (Makowski 2005). Nkọwa a megidere mgbalị ndị emere n'oge gara aga iji wee biri na ebe obibi ndị mmụọ ma ọ bụ aghụghọ nke ihe dị iche n'etiti ezi beguines na ụmụ nwanyị na-enweghị obi eziokwu bụ ndị kwuru ọnọdụ beguine na-enweghị ido onwe ha n'okpuru obodo a ma ama. Iji mee ka okwu sikwuo ike, obodo ndị dị na Europe n'oge ochie nabatara ọtụtụ ọrụ ebere na nchegharị obodo, ụfọdụ n'ime ha yiri "beguine-like" na ntinye aka ha n'ekpere na ịrụsi ọrụ ike n'ụwa (Böhringer 2014). Dịka ọmụmaatụ, ndị isi ụlọ akwụkwọ Franciscan bụ ụmụ nwanyị nwanyị ji obi ha niile na-agbakwunye na Franciscan Order. Agbanyeghị, dị ka beguines, tertiaries anaghị ewere nnukwu nkwa, nkwekọrịta ndị mọnk, ha sooro iwu a kwadoro site na nke papị, nke nke usoro nke atọ nke St. Francis, yabụ ndị isi. N'ihi myirịta na ụzọ ndụ ha na ejiji ha (otu abụọ ahụ nwere agwa dị mfe), agbanyeghị, ndị isi ụlọ akwụkwọ na-adịkarị mgbagwoju anya ma ọ bụ nwee mgbagwoju anya na beguines. N'ezie, ọtụtụ ndị aghụghọ, na-ekwenye na ha nwere ike ịgbanahụ ikpe site na ịgbaso iwu a kwadoro nke ọma, zara nzaghachi nke Vienne site n'ịghọ ndị isi (Simons 2001).
N’August nke 1318, Pope John XXII weputara oke-ehi Ratio recta, nke nwara inye ụfọdụ ndị nduzi nke ndị isi chọọchị ụfọdụ ọrụ nke ịmata ọdịiche dị n'etiti “aghụghọ” nke iwu Vienne lekwasịrị anya na nke “ezi” aghụghọ ndị a gụpụrụ Cum de quibusdam si a na-akpọ nkepe ụzọ mgbapụ. O sina dị, Ratio recta, dika Mgbe de quibusdam, hapụrụ ọtụtụ ohere maka nkọwa na-adịghị mma ma na-emegiderịta onwe ha. Kpọmkwem, iwu ahụ gbara ndị ọchịchị obodo ume ka ha ghara imegbu ndị aghụghọ “na-eme ihe n'eziokwu”; n’agbanyeghị nke ahụ, popu siri ọnwụ na iwu a apụtaghị na ọ bụ ya mma beguine estate, ọ chọghịkwa imegide mkpebi ndị mbụ emere iji katọọ ọkwa beguine. Ya mere, John XXII gara n'ihu na ọdịnala nke papacy nke iwepụta nkwupụta ndị na-enweghị isi bụ nke mere ka ọ pụta ìhè na enweghị iwu nke ndị beguines, na-ahapụ ụzọ meghere maka mmegide na-aga n'ihu nke ụmụ nwanyị okpukpe, site na aha ọ bụla a na-akpọ ha (Makowski 2005; Van Engen 2008).
N’afọ ndị sochiri mbipụta nke iwu Vienne, ndị bishọp nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị beguines lara azụ ịmanye iwu a n’ihi ejighị n’aka ma iwu a etinyere na beguines ha “. Ka ọ dị ugbu a, na obodo dị iche iche, ndị ọchịchị obodo kpọrọ iwu iji jichie ngwongwo aghụghọ ma ọ bụ rụgide ụmụ nwanyị ịnakwere Iwu nke Atọ nke St. Francis. N'ikpeazụ, na December nke 1320, Pope John XXII gbalịrị ịmatakwu nkọwa banyere ọnọdụ beguine, na-agwa ha okwu Mgbe de mulieribus ọnọ mme bishop ke Tournai, Cambrai, ye Paris. Na-amata na “aghụghọ” ndị aghụghọ nwere ike ibikọ ọnụ na aghụghọ ma ọ bụ na beguine conven, Mgbe de mulieribus chọrọ iji dozie nsogbu dị n'etiti ndị bishọp na ndị ọchịchị ụwa site n'ịgwa ndị bishọp ka ha nyochaa ụlọ beguine na diọcese ha ma ha onwe ha ma ọ bụ site n'aka ndị nnọchi anya ha iji hụ na ụmụ nwanyị anaghị etinye aka na esemokwu ma ọ bụ mkparịta ụka na-akwadoghị (Van Engen 2008).
Nkọwa na ịmanye iwu nke Vienne mechara gbadata n'omume obodo (nke ndị bishọp, ndị isi obodo, na ndị ụkọchukwu, ma ndị nke ụwa na ndị okpukperechi) n'ebe ndị ode akwụkwọ, beguines na tertiaries nọ. Nnyocha nke Episcopal gara n'ihu ruo ihe dị ka 1328, na-eduga n'ikpeazụ na mkpochapu nke ụmụ nwanyị na-ebi n'ụlọ ndị beguine na aghụghọ na mba ndị dị ala na ugwu France. Ntughari nke ndịda Ndịda Ndịda dịbu nke akụkụ nke mmekọrịta mmadụ na obodo na ndị ọchịchị obodo na-akwadokarị ndụ ha (Simons 2001). N'ime narị afọ nke iri na anọ na narị afọ nke iri na ise, iwu aghụghọ n'ụlọ ikpe n'obodo ndị dị ka Brussels, Ghent, Mechelen, na Liège gara n'ihu na-etinye ọtụtụ narị ụmụ nwanyị aka, bụ ndị a na-akpọghị "beguines" n'ụzọ doro anya. N'ezie, imirikiti ógbè ndị beguine nwere ike ịhazigharị ma kwekọọ na nrụgide na ọnọdụ ndị dị na mpaghara, na-adị ndụ ruo n'oge oge mbụ.
Ka o sina dị, na mpaghara ụfọdụ, nnyocha ahụ dugara n'ibelata nhọrọ maka ụmụ nwanyị na-anụ ọkụ n'obi ka ndị isi obodo leve nsogbu ahụ iji dozie obodo beguine, si otú a mee ka ha yie ụlọ ndị mọnk ọdịnala, ma gbochie ụmụ nwanyị n'èzí nke ndi congu ma obu ndi ozo bi na ndu. Ọtụtụ ndị na-ekweghị ekwe gbanwegharịrị iwu ụlọ ha n'ụzọ mebere beguines nnwere onwe ịgagharị na usoro nlekọta nke ndị ụkọchukwu. Nnukwu Beguinage nke Paris gbanwere ụkpụrụ ya, nke mere ka ọrụ nlekọta nke mpaghara Dominican sie ike (Miller 2014). Grand Beguinages nke Brussels na Mechelen malitere ka ndị bi na-ekwe nkwa ịgba ogige (More 2018).
N'ebe ndị ọzọ, ndị ọrụ mpaghara jidere na enweghị nghọta dị na iwu Vienne iji bulie ma ọ bụ mebie otu akụkụ ma ọ bụ ihe kpatara ya. Somefọdụ obodo ndị dị na Germany, ọnọdụ beguine ahụ bụ ntụpọ dị mma na arụmụka kpụ ọkụ n'ọnụ banyere mgbanwe, ịda ogbenye, na ikike nke mendicancy (Deane 2014). Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị beguine zara Vienne Iwu site n'ịkpọ onwe ha ndị isi obodo na ịgbakwunye njikọ ha na ndị isi obodo Franciscan, ndị agha ndọrọ ndọrọ ọchịchị mgbe ụfọdụ kpochapụrụ uru dị n'otu aha karịa nke ọzọ. Na ngwụsị narị afọ nke iri na anọ, ndị na-emegide ndị friscan Franciscan na Basel jiri iwu mgbochi beguine wakpo ndị isi obodo, na-eme ka ndị isi obodo ahụ tinye ọnụ na ndị isi. Ndị na-agbachitere ndị ụkọchukwu ahụ kwusiri ike na ndị isi obodo ahụ gbasoro iwu nke akwụkwọ a kwadoro ma si otú a dị iche na obodo ndị na-emeghị nke ọma. Mgbalị ndị dị otú ahụ hapụrụ obodo ndị fọdụrụ na Basel ndị na-enweghị nchebe na ndị na-enweghị ike, ebe ọ bụ na nchekwa ndị friars dị na ịchọpụta otu ndị a dị ka ebumnuche ziri ezi nke Iwu Vienne. Site na 1405, a chụpụrụ beguines na Basel kpamkpam (Bailey 2003).
N'ime narị afọ nke iri na anọ na narị afọ nke iri na ise, ndị na-eme nchọpụta na-atụgharịkarị anya na beguines na obodo German, na-ebo ụmụ nwanyị na-anụ ọkụ n'obi ebubo na ha na-akwado nkwenkwe ọdịnala, nkwenkwe ndị iwu Vienne Ad nostrum ekewet, na-enweghị ihe akaebe, na beguines na beghards niile (McDonnell 1954; Lerner 1972; Kieckhefer 1979). Ihe ndị a kpatara esemokwu obodo, ọkachasị esemokwu dị n'etiti ndị ụkọchukwu nwoke, nke na-elekwasịkarị anya na mmekọrịta ụmụ nwoke na ịzụ atụrụ na ụmụ nwanyị nwere okwukwe. N'ebe ụfọdụ, ụmụ nwanyị hapụrụ aha ahụ, na-akpọ onwe ha ụmụnna nwanyị ime mmụọ (geistliche schwest) ma ọ bụ chetaghachi (klausnerinnen) mgbe ha ka bi ọtụtụ ihe ha biri na mbụ (Deane 2014).
Obodo Beguine malitere nyocha ọhụụ na narị afọ nke iri na ise dị ka ndị ụkọchukwu na ndị isi obodo, nke ndị otu na-ahụ maka idobe anya na mgbanwe na mmeghari ohuru, chọkwara ịdọ ụmụ nwanyị okpukpe niile aka na ntị, n'agbanyeghị agbanyeghị na ọnọdụ canonical (More 2018). Ọtụtụ ndị jikọtara ya na iwu ndị ahụ siri ike, ndị na-eleru anya bụ mgbanwe mgbanwe sara mbara nke otu dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche na-achịkwa. Oku ndị a maka mmụgharị okpukpe dị iche na Europe dum, dabere na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị mpaghara. Dị ka ọ dị na narị afọ nke iri na anọ, ụfọdụ obodo beguine nakweere iwu ndị isi nke Augustinian ma ọ bụ Franciscan, ebe ha gara n'ihu na-adị ndụ ma na-arụ ọrụ dị ka ha nweburu. Na Paris, mgbaghara nke eze diri ụnwụ nri, agha, na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke narị afọ nke iri na anọ na nke iri na ise, ọ ga-agbasasị n'okpuru nrụgide nke ndị na-ahụ maka ọrụ anya. Na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị mmadụ abụọ ka fọdụrụ n'ezinụlọ eze ahụ, eze France bụ Louis nke Iri na Isii (r. 1461-1483) kpebiri ịfefe ụlọ ndị ahụ na otu ụlọ akwụkwọ Franciscan na 1471. Ka ọ na-erule 1485, ebe mgbago ahụ bụ obodo nke Ndị na-ahụ maka ogbenye Clares (Miller 2014).
N'ihe metụtara Ndozigharị nke ndị Protestant na Kansụl nke Trent (1545 ruo 1563), Chọọchị Katọlik lekwasịrị anya ọzọ n'okwu gbasara ịdọ aka ná ntị n'okpukpe ụmụ nwanyị, ọkachasị ogige. Dị ka ọ dị n'oge gara aga, ndị beguine na-eguzogide ogige site na ịkpọku ọnọdụ ha na-enweghị akwụkwọ. Ka o sina dị, na 1566, Pope Pius V (peeji nke 1566-1572) nyere oke ehi ahụ Ndi ekpemagu, nke siri ọnwụ na obodo ụmụ nwanyị niile na-ekpe okpukpe, na-enweghị otu, ga-edebe ogige siri ike (More 2018). N'agbanyeghị nke ahụ, ọrụ ụmụ nwanyị ji obi ha niile na-arụ n'obodo na obodo ndị dị na Europe, ọkachasị n'akụkụ nkuzi, ọrụ ụlọ ọgwụ, na ọrụ ebere maka ndị ogbenye, gara n'ihu na-enwe nnukwu uru. Mụ nwanyị akpọrọ na ọrụ a, mgbe ahụ, enweghịzi ike ịkọwapụta dị ka "onye okpukperechi," ebe ọ bụ na, post-Trent, ọnọdụ dị otú a chọrọ mgbachi siri ike ma si otú a gbahapụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike n'ụwa. N'ịkọwa ọnọdụ ha, ụmụ nwanyị guzobere obodo dị nsọ dịka Ursulines na Dévots (Rapley 1990). Ya mere, mgbe ha na-awụfu aha ahụ bụ “beguine,” ụmụ nwanyị ndị a ji obi ha niile na-efe ofufe gara n’ihu ibi ndu nke ekpere na ije ozi n’ime ụwa, dịka ha biri na mbụ Trent.
Beguines na beguinages nọgidere bụrụ akụkụ nke ndụ obodo mepere emepe na mba ndị dị ala na mbido oge a, ọbụlagodi Ndozigharị ndị Protestant na Dutch Revolt nke narị afọ nke iri na isii bibiri ọtụtụ ikpe aghụghọ nke mpaghara (Moran 2010). Na 1585, na mweghachi nke Spanish, ọchịchị Katọlik na mpaghara ndịda (ebe ugwu dịpụrụ adịpụ na Protestant), eweghachiri ụfọdụ obodo beguine, mana na-agbanyekwu ọkụ nchịkwa nke ụka. Dị ka ọ dị na narị afọ nke iri na atọ, ndị ụkọchukwu nọ n'ógbè n'oge Ndozigharị ahụ kwalitere beguin dị ka ihe nlereanya maka ndị nkịtị na ndị inyeaka na mgbalị nke Counter-Reformation. Ndị bishọp gbalịsiri ike ịga leta ha, na-ekwusi ike na ịdọ aka ná ntị siri ike, imechi ụlọ, na ịnabata iwu siri ike. Ọchịchọ ị gosipụta beguines dị ka otu ìgwè dị ka usoro dị n'usoro ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'eziokwu, mekwara ka e nwee akụkọ akụkọ ihe mere eme, mezue ya na onye guzobere beguines: St. Begga (Moran 2010; More 2018). [Foto dị n'aka nri] A mụrụ na mmalite narị afọ nke asaa, Begga bụ ada Pepin nke Okenye. Mgbe di ya nwụsịrị, Begga guzobere ebe obibi ndị mọnk na Andenne, ebe ọ nwụrụ dị ka abbb na 691. Ọ bụ ezie na o doro anya na ọ nweghị njikọ ọ bụla na akụkọ ntolite beguine, aha Begga na ọnọdụ dị nsọ mere ka ọ bụrụ nwanyị a na-apụghị iguzogide eguzogide ọmarịcha nwanyị maka otu usoro iwu beguine ”Na narị afọ nke iri na isii (More 2018). Ihe okike nke nwanyi na “iwu nke beguines” kwalitere akuko ifo na obodo ndi beguine na mpaghara di iche iche (obodo ndi nwere akuko di iche) nwere ihe omuma ndi mmadu.
Iwu nke ụlọ ikpe nke ndịda Ndịda Ndịda nwere nnukwu ndakpọ ọzọ na njikọta nke French Republic nke mpaghara ahụ na 1794, bụ ebe nkewapụrụ ụlọ ahụ ma were ya. Na 1830, na nguzobe nke alaeze Belgium, mpako ịhụ mba n'anya mere ka enwere mmasị na aghụghọ na akụkọ ihe mere eme ha. Afọ iri na asaa ka dị ndụ na narị afọ nke iri abụọ, gụnyere Saint Catherine na Breda, Saint Catherine's na Mechelen, na Saint Elizabeth's nke Ghent. N’afọ 1998, etinye iwu iwu ụlọ ikpe iri na atọ na UNESCO na World Heritage. Na 2013, onye ikpe ikpeazụ, Marcella Pattyn, [Foto dị n'aka nri] nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri itoolu na abụọ.
ỤLỌDỤ / EKWERE
Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ a na-ebo ebubo na nkwenkwe ụgha na ozizi nkuzi, ndị beguines na-agbaso ọdịnala Roman Katọlik ma bụrụ ndị ama ama maka nsọpụrụ nsọ ha (Elliott 2004). Beguines kwere nkwa nke onwe, nke ịdị ọcha nke ịdị ọcha ma chụsoo ndụ nke ekpere na-atụgharị uche na ịrụsi ọrụ ike n'ụwa. Ọ bụ ezie na ekweghị ụmụ nwanyị ime nkwusa, ha weghaara onwe ha ịchụso oku ime mmụọ ha n'ụzọ ndị ọzọ, ya bụ ilekọta ndị ogbenye na ndị ọrịa, agbamume ime mmụọ ma ọ bụ agbamume nke ndị agbata obi ha, na ọrụ aka ọrụ. Ya mere, ndị beguines mere uwe ọha na eze na uwe ha na omume ha ibi ndụ iche (n'echiche nke ibi ndụ pụrụ iche, ọbụlagodi na ndụ okpukpe) n'etiti ndị Kraịst ibe ha (Van Engen 2008).
Nkowa ederede nke ndi beguines nke ime mmesi ike mesie ike ha na nkwenkwe ha, nmekorita nke ha (karisiri ike nkwuputa, ncheghari na nmeko), na ntinye onwe ha nye idi ocha na ije ozi. Ndị ụkọchukwu na-ewetakarị ọrụ beguines na okwu okpukpe, na-ekwusi ike banyere ekpere, nhụjuanya anụ ahụ, na nrube isi nye ndị isi ụka na nkọwa ha na agbachitere ụmụ nwanyị a (Caciola 2003; Elliott 2004). Ndị aghụghọ beguines, ọkachasị na narị afọ nke iri na anọ, kwuru na beguines nwere echiche mgbochi na echiche antinom (McDonnell 1954; Lerner 1972). Kpọmkwem, iwu Vienne Ad nostrum kwuru na ndị beguines, tinyere ụmụ nwoke ibe ha, ndị na-arịọ arịrịọ, kwenyere na mkpụrụ obi nwere ike iru ọnọdụ izu okè nke na-egbochi mkpa ọ bụla maka sakramenti na iwu nke omume ụka. Agbanyeghị, enweghị ihe akaebe na echiche ma ọ bụ nkwenye ndị a bụ ụdị nke ndị beguines, bụ ndị n'ihi ọnọdụ ha na-enweghị isi na-ejikarị ha eme ihe dị ka ndị pawn na scapegoats na esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na esemokwu okpukpe (Lerner 1972; Deane 2014; Miller 2014).
A maara beguines na beguinages na convens oge ochie Europe maka ijikọta ọrụ na-arụsi ọrụ ike na ekpere na-atụgharị uche. Ọ bụ ezie na iwu nke ụlọ oriri na ọ beụ ,ụ beguine na ụlọ, ọkachasị na narị afọ ndị gara aga nke akụkọ ntolite beguine, mesiri usoro ndị mọnk ike, ọkpụkpọ beguines bụ iji rụọ ọrụ na ụwa maka ndị ọzọ. Befọdụ iwu na-achọ ka ndị bi na ha na-aga uka kwa ụbọchị ma na-agbaso usoro ekpere nke ekpere na nche (Simons 2001; Moran 2010; Miller 2014). N'obodo ụfọdụ, ndị beguine na-agụ abụ ọma site n'abụ ọma ma ọ bụ akụkụ akwụkwọ nsọ ndị ọzọ dabara n'otu ụbọchị oriri. Choirs nke beguines, mgbe ụfọdụ ha gụrụ akwụkwọ ma zụọ ha egwu na ụlọ akwụkwọ beguinage, bụrụ abụ ederede (mgbochi na azịza) dabara adaba n'ọfịs Chineke. A makwaara ndị otu òtù aghụghọ na-eme nche maka ndị na-elekọta ma ọ bụ ndị nwụrụ anwụ nwụrụ anwụ. Beguines kụziiri ụmụ akwụkwọ, lekọta ndị ọrịa, lie ndị nwụrụ anwụ, gbaa Ndị Kraịst ibe ha ume ka ha gaa Mass ma nata sacrament. N'ezie, ijere ndị ọzọ ozi n'ụzọ ime mmụọ na nke ihe onwunwe bụ akụkụ pụtara ìhè nke ndụ aghụghọ ahụ na-akọwa akụkụ ya na-adịgide adịgide n'obodo ndị mepere emepe (Simons 2001; Miller 2014; Deane 2016).
NKWUKWU / LEADERSHIP
Obodo Beguine bidoro n'ụdị dị iche iche (obere ụlọ, ndị conven, ma ọ bụ beguinages) n'otu oge (Simons 2001). Agbanyeghị na beguines gabigara mpaghara dị iche iche biri ndụ yiri otu ekpere na ọrụ, enweghị enwetaghị iwu iji ọ dịghịkwa ụlọ aghụghọ ma ọ bụ aghụghọ nke a na-azọrọ na ọ bụ onye ndu ma ọ bụ na-esonyere ndị obodo beguine ndị ọzọ. Ebe ọ bụ na ndị beguines chọrọ nlekọta na-azụ atụrụ, ha na ndị ozuzu aturu, ndị ụkọchukwu, na ndị mọnk nwere mmekọrịta, mana obodo ole na ole mepụtara mmekọrịta pụrụ iche na usoro ọ bụla.
Ka o sina dị, ka oge na-aga, ndị obodo beguine nwere usoro nhazi, na-emepe atụmatụ ndị yiri ụlọ ndị mọnk. Ndị isi obodo n'ofe ugwu Europe ghọtara uru ime mmụọ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nnọkọ na-enweghị isi nke ụmụ nwanyị na-anụ ọkụ n'obi na-apụta n'obodo ha, na-enyekarị nkwado ihe onwunwe na ikike iwu nke mere ka ha nwee ike ịbanye na ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide. Institutionslọ ọrụ ndị a sitere na obere ụlọ obibi ndị agbakwunyere n'ụlọ ọgwụ, na obere ụlọ nke ụmụ nwanyị iri na abụọ ma ọ bụ karịa (ndị a na-akpọkarị beguine convents) ruo na nnukwu, ogige ndị nwere mgbidi, a na-akpọ beguinages (ma ọ bụ begijnhoven). N'iji ụkpụrụ, aghụghọ bụ ihe ngosipụta nke ihe mgbagwoju anya nke ndụ beguine, nke dọtara ụmụ nwanyị sitere na nzụlite mmekọrịta na akụ na ụba dị iche iche na mkpali, na-eje ozi dị ka ogige maka nke sitere n'ike mmụọ nsọ, ihe mgbakwasị ụkwụ maka ndị na-alụghị di na nwunye, na ezumike nká maka ndị agadi (Ziegler 1987; Simons 2001; Moran 2010; Miller 2014). Iwu ụlọ ikpe ahụ [Foto dị n'aka nri] na-ele anya na gburugburu ogige ma tinye ụlọ obibi nke ndị ọchụnta ego na ebe obibi maka ụmụ nwanyị nwere ezigbo ego. Mgbidi beguinage na ụlọ ụka na-ewepụ mkpa ọ dị beguines ka ya na ndị larịị buru ibu na-emekọ ihe, na-eme ka nchegbu gbasara nchekwa ụmụ nwanyị na aha ọma ha. Ka o sina dị, a na-ahụkarị beguinages n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá obodo ma ọ bụ n'okporo ụzọ, na-egosipụta ọrụ iwu ndị na-eme ka ndị mmadụ na-eme. N'akụkụ ụfọdụ, mgbaghara nke obodo mejupụtara otu obodo n'ime obodo ma biri ọtụtụ narị ụmụ nwanyị. Otutu nwetere ikike ikike onwe onye (ya bụ, ihe ùgwù) ruru ụka parish. Dika ndi nwanyi ndi nwanyi mara amara, ndi bekee choro nlekọta ndi ozuzu atukwasiri obi na ndi isi okpukpe na ndi isi obodo nyere aka mee ka uzo di nma site na nkwekorita ha na ndi ukochukwu na esemokwu esemokwu (karia n'etiti ndi isi na ndi isi ala) banyere ikike ndi mmadu (Miller 2014). Iwu na-enwekarị ndị ụkọchukwu na ndị ụkọchukwu nke ha ime Mass, nụ nkwupụta, ma kwusaa okwuchukwu. Ya mere, ịba amụrụ yiri ka ọ̀ na-emeju “akụkụ okpukpe” na nke na-eche echiche nke ndụ aghụghọ. N’ezie, ụkpụrụ e ji anabata mmadụ, iwu ya, na mgbidi ya chịkwara ma mee ka ndị mọnk bụrụ ihe mbụ, bụ́ nke na-abụkarị nzukọ ụmụ nwanyị na-anụ ọkụ n’obi n’onwe ha. Ka o sina dị, beguines abụghị ndị nọn. Obodo Beguine, n'adịghị ka ndị nchụaja, nyere ndị bi na ha nnwere onwe ịgagharị iji dị mkpa iji rụọ ọrụ mmekọrịta dị mkpa, gụnyere ilekọta ndị ọrịa, ndị na-anwụ anwụ, na ndị nwụrụ anwụ. N'ihi ya, ịgha ụgha dị nnọọ egwu, na-adọta ndị nkịtị na ndị na-akwado ya, yana ndị ọbịa ndị ọbịa. N'otu aka ahụ ka adọpụtara ndị bi na ya ka ha nwee ọbụbụenyi ime mmụọ na ndị ndụmọdụ ụkọchukwu, soro ndị ezinụlọ ha na ndị ha na ha na-azụ ahịa kwurịtara okwu, wee mezuo ọrụ ime mmụọ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ihi ya, a na-ahụkarị ire anya dị ka ndị bi na ha na nke ọma agbakwunyere na obodo ndị mepere emepe (Simons 2001; Miller 2014).
Beguine na-eme mkpọtụ ma na-eme nke ọma dị ka obodo a ma ama (ma ọ bụrụ na ọ bụghị gọọmentị). N'ezie, ịdị adị nke ụlọ beguine na obodo ugwu Europe dị mgbagwoju anya nghọta obodo banyere ihe ọ pụtara na nwanyị ga-amata (ma ọ bụ kpọọ ya aha) dị ka beguine (Miller 2007). Ntughari, ya na iwu ha, mgbidi ha, na nlezianya ejiri nlezianya na-anabata ihe dị iche n'etiti beguines na ndị nọn (More 2018). Ka ọ na-erule etiti narị afọ nke iri na atọ, n'ọtụtụ obodo na obodo, ndị ọchịchị obodo ahụ malitere ile ebe obibi ndị nọn beguine ma ọ bụ aghụghọ anya dị ka naanị ọnọdụ dị mma maka ụmụ nwanyị na-anụ ọkụ n'obi, na-arụ ụka na ndị na-anọgideghị na ụlọ ndị dị otú ahụ ekwesịghị ka a ga-ahụta dị ka ndị aghụghọ kama dị ka ndị na-enweghị obi eziokwu ma ọ bụ ndị inyom na-enweghị ntụkwasị obi nke zuru oke bụ ndị jiri ndụ aghụghọ dị ka ihe mkpuchi maka omume rụrụ arụ (McDonnell 1954).
Onye isi anwansị na ntughari uche na-abụkarị onye isi (nne nwanyị), onye nwere ikike dị ukwuu n'ime obodo. Magistra na-agbaso ego obodo, na-achịkwa mkpebi nnabata, dụrụ ndị ndu okpukpe na ndị isi okpukpe ndụmọdụ banyere ụkpụrụ ndị na-achị ndị bi na ya, ma nye ụmụ nwanyị nkuzi okpukpe (Simons 2001; Moran 2010 na 2018; Miller 2014). N’obodo Ndị Dị n’Ebe Dị Ala, e buru ụzọ na-ebugara ndị Dominican iwu iwu dị ka onye nduzi nduzi aghụghọ nke ime mmụọ. Na Bruges, dịka ọmụmaatụ, iwu tupu Dominican enyere nne nwanyị ukwu nke aghụghọ ahụ aka ịkpọ aha onye ụkọchukwu. Na Ghent, Dominican kpọpụtara tupu nwanyị nwe begu yana ndị ụkọchukwu na-elekọta obodo. Na Lille, ndị ụkọchukwu parish họpụtara ndị ụkọchukwu na-eje ozi nsụgharị ahụ. N'ebe dị iche iche n'akụkọ ihe mere eme, n'oge n'oge mgbanwe ma ọ bụ esemokwu okpukpe, ndị isi obodo chọrọ ịbawanye nlekọta okpukpe na / ma ọ bụ nke ụwa nke obodo beguine (McDonnell 1954; Simons 2001; Galloway 1998; Miller 2014.)
ISSES / CHALLENGES / SIGNIFICANCE
Ọ bụghị ụmụ nwanyị dere ọtụtụ n'ime ihe anyị maara banyere beguines mana ọ bụ ndị odeakwụkwọ na-ekiri ihe na-emenụ, ụfọdụ n'ime ha gosipụtara mmegide megide okpukpe ụgha, ọkachasị n'etiti ụmụ nwanyị. N'ihi ya, ndị ọkà mmụta aghaghị ịdabere na ndị dere akwụkwọ, mgbe ụfọdụ, ndị iro na misogynistic. N'otu aka ahụ, otu n'ime nsogbu kasịnụ maka ndị na-ahụ ihe mgbe ochie na ndị ọkà mmụta nke oge a bụ ọdịdị na-amị amị nke okwu ahụ bụ "beguine," nke nwere ike ịpụta ma akparamagwa akparamagwa yana ịbụ onye otu n'ime obodo beguine a ma ama (Miller 2007; Deane 2008).
N'echiche nke ụfọdụ ndị na-eche echiche oge ochie, ọkachasị ndị ụkọchukwu, ndị beguine megidere atụmanya gbasara inwe mmụọ nke nwanyị site na ịnabata ndụ okpukpe "dị ike" nke emere, site n'ọdịdị ya, n'ihu ọha. Ebe ọ bụ na a nabataghị ha dị ka usoro okpukpe, beguines enweghị ọkwa ọ bụla ma si otú a bụrụ ndị ọ dị mfe ndị isi ụkọchukwu na-akatọ mmụba nke ụzọ ndụ okpukpe na narị afọ nke iri na atọ. Ndị na-agbachitere ndụ beguine si otú ahụ chọọ imebi nkatọ site na ịme ka akụkụ "adịghị mma" nke ọnọdụ ahụ pụta, iwu akụkọ akụkọ na ịtọ ntọala ụlọ ndị nọn maka ụmụ nwanyị (dị ka aghụghọ). N'agbanyeghị nke ahụ, nwanyị ọ bụla chọrọ ịnakwere ya gosipụtara aghụghọ aghụghọ ahụ, na-eduga na ebubo nke enweghị obi ọcha na ihu abụọ. Ọzọkwa, ụfọdụ ndị na-ekiri ihe na-emenụ n'okpukpe kwenyere na beguines, dị ka ụmụ nwanyị na-enweghị mmekọ okpukpe, nwerekarị ọchịchọ ịnakwere na ịgbasa echiche ndị heterodox.
Ọgbụgba ndụ gbasara “oge ufodu” beguines dị ka ọ dị mkpa site na ndụ na ọrụ nke Marguerite Porete (d. 1310). [Foto dị n'aka nri] N'oge ụfọdụ n'oge mmalite afọ 1290, Marguerite (nwanyị sitere na diocese nke Cambrai) dere akwụkwọ omimi nke a maara dị ka Enyo nke Mkpụrụ Obi Dị Mfe. Edere ya n'asụsụ French oge ochie, akwụkwọ a na-akọwa mkpochapu mkpụrụ obi, na-adabere na ọnọdụ nke enweghị ihe ọ bụla, ma ọ bụ ịdị n'otu na Chineke na enweghị oke. O doro anya na ewu ewu n'oge ya, Nkiri ahụ kpasuru esemokwu na mmalite narị afọ nke iri na anọ maka ọtụtụ ihe. Nke mbu, edere akwukwo a na French karia Latin, bu ihe omuma nke mmuta, ya mere ndi ngwangwa nke guru akwukwo. Nke abuo, akwukwo ahu nwere okwu dika “nkpuru obi nke ekpochapuru n’onu ihe nke onye okike puru, ma kwesiri inye okike ihe nile ichoro,” nke ufodu were dika putara na nkpuru obi puru ibu onye ya na Chineke ma obu na mgbe nka kwuo na enweghị mkpa maka Nzukọ-nsọ, sacrament ya, ma ọ bụ koodu ọma ya. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ọ bụghị nkọwa Marguerite bu n'uche na nkwupụta a, ndị isi ụka ụka dị n'ógbè ahụ na-atụ egwu na a na-aghọtahiekarị nkuzi akwụkwọ ahụ n'ụzọ dị mfe, ọkachasị ndị na-agụghị akwụkwọ na ndị ọkà mmụta sayensị na-amaghị (Field 2012.)
Dabere na akwụkwọ ahụ n'onwe ya, o doro anya na Marguerite gụrụ akwụkwọ ma nwee ike ịnweta akụ, dị ka akpụkpọ anụ, ide ihe, na ikekwe ọbụna odeakwụkwọ. O nwekwara ndị nkwado ndị ụkọchukwu dị mkpa, gụnyere ụmụ nwoke atọ ndị ji nlezianya kwenye nkwado nke Nkiri ahụ. Ka o sina dị, Bishọp nke Cambrai, Guido nke Collemezzo (r. 1296-1306), onye o yiri ka ọ nwechaghị ntachi obi maka ụmụ nwanyị na-agbada n'okwukwe, kwupụtara akwụkwọ Marguerite nke jụrụ okwukwe ma nye iwu ka a gbaa ya ọkụ n'ihu ọha na Valenciennes, eziokwu nke na-egosi na nke a bụ obodo ebe Marguerite bi n'oge ahụ. Dabere na ndekọ nke ikpe ya, bishọp gwara Marguerite na a ga-enyefe ya n'aka ndị isi ala ma ọ bụrụ na ọ gbalịa ịgbasa echiche ya, ma ọ bụ ederede ma ọ bụ ederede. O doro anya na ụjọ atụghị ya, Marguerite gara n'ihu na-ekesa akwụkwọ ya, na-abịakwute bishọp ọzọ, onye zigara ya Paris na mbubreyo 1308 iji zaghachi onye Dominican na-enyocha France, William nke Paris (d. 1314). Na Paris, Marguerite nọrọ n'ụlọ mkpọrọ ruo ọnwa iri na asatọ, na-ajụ ịkwado onye nyocha ahụ. Ka oge na-aga, William gara n'ihu n'okwu ahụ site n'itinye akwụkwọ Marguerite ikpe, na-achịkọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngalaba mmụta okpukpe niile iji kpee ikpe nke akwụkwọ ahụ. Mgbe ndị isi mahadum were otu olu kwupụta na akwụkwọ a jụrụ okwukwe, ha kwenyere ụzọ iji maa Marguerite ikpe ọnwụ. Na May 31, William kwupụtara Marguerite "onye jụrụ okwukwe jụrụ okwukwe" ma nyefee ya n'aka ndị ọchịchị ụwa, ndị mezuru ikpe ya. N'echi ya na June 1, 1310, a kpọrọ Marguerite Porete ọkụ n'elu osisi na Ebe de Grève na Paris (Ubi 2012; Van Engen 2013).
Ihe ịma aka ọzọ bụ otu esi gosipụta beguin na akwụkwọ ọgụgụ. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, ma ndị ọkà mmụta na ndị a ma ama na-ewu ewu na-egosi na ọ bụ ndị na-enweghị ike, na-akpagbu ndị na-emegbu onwe ha, ndị nna ochie ụka, ma ọ bụ ndị na-agba ọchịchị mgba okpuru na-ajụ imezu ihe ndị mmadụ tụrụ anya ya. N'okwu abụọ ahụ, ihe e mesiri ike bụ ntakịrị oke ha. Ọdịdị akụkọ ihe mere eme nke ịchụ ụmụ nwanyị okpukpe dị ka ndị e merụrụ ahụ ma ọ bụ ndị nnupụisi sitere na nnupụisi isi na isi mmalite, dịka iwu nke kansụl ụka. N'ezie, n'etiti ndị ochie, beguines gosipụtara nke ọma n'akụkọ ihe mere eme nke ịjụ okwukwe na esemokwu okpukpe, ubi ndị nwere ikike ịkatọ iwu ụka na akwụkwọ nyocha (Deane 2008 na 2013). Ọzọkwa, ihe oyiyi nke beguines dị ka obere akụkụ dabara na echiche nke oge a banyere ụmụ nwanyị mgbe ochie. Nke ahụ bụ ikwu, echiche e nwere ebe nile bụ na ụmụ nwanyị bụ nwunye ma ọ bụ nọn. Ya mere, beguines ga-abụrịrị ụmụ nwanyị na-ekweghị ịlụ ma ọ bụ banye na ebe obibi ndị nọn (yabụ ndị a tara ahụhụ) ma ọ bụ ndị ji aghụghọ jụ ndị abụọ (nnupụisi) Ọzọkwa, akụkọ ihe mere eme nke ụka Roman Katọlik na - ejikọtakarị ọhụhụ na ịbịanye aka nke ụmụ nwanyị na ụka na ọdịda, nsogbu, ma ọ bụ "ịda mba" maka ụmụ nwoke, si otú a na-etinye beguines dị ka akụkụ nke oke ịnụ ọkụ n'obi okpukpe na-enweghị nchịkwa na nke anaghị anabata. (n'ikpeazụ na-apụghị izere ezere) nwere ma na-eduzi ọwa ndị a na-anabata nke ọma (Grundmann 1995; Deane 2008).
N'agbanyeghị nke a, na beguines hụrụ nkwado dị ukwuu site n'aka ndị ụkọchukwu, ndị isi obodo, na ọha na eze. Beguines dị mkpa, bụrụ ndị ọnụ ahịa obodo ha. Ọbụna dịka ha na-abanyekarị na arụmụka banyere ịda ogbenye okpukpe, mgbachi, na ikike ndị ụkọchukwu, ndị beguine obodo gbanwere ma gbanwee maka ịtụgharị atụmanya banyere ọnọdụ ime mmụọ nke nwanyị, na-agbanwekarị aha ha, gbanwee iwu ụlọ, ma ọ bụ chọọ ndị mmekọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị nkwado iji nwee ibi ndu nke ekpere na ije ozi. N'ihi ya, ọ nwere ike isiri ndị ọkà mmụta ike ide banyere obodo ndị a, ebe ọ bụ na okwu ahụ bụ "beguine" na-esegharị na ndekọ ndekọ akụkọ (Böhringer 2014).
Akụkọ banyere beguines na-egosiputa na ụmụ nwanyị enweela, ogologo oge karịa ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nwere ike iche, achọta ụzọ okike iji gbakọta na obodo ndị ebumnuche [Foto dị n'aka nri] na ibi ndụ nke ọrụ na njikọ aka na ụwa n'agbanyeghị nsogbu ndị nna ochie. Nhọrọ beguine dị irè, na-agbanwe agbanwe, ma na-agbanwe agbanwe, na-egosipụta mkpa mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze nke ndị mgbe ochie. Obodo ndị a, ebe ha na-adọta nkatọ oge ụfọdụ na ọbụlagodi mkpagbu, agbasiri ike na ọha oge ochie dịka ike nke ekpere, ọnụ na netwọkụ ime mmụọ dịpụrụ adịpụ, na ndị na-eweta ọrụ ndị dị mkpa. Vomụ nwanyị ndị nwanyị nwere oke nwee ike ịnwale usoro nkatọ na mgbanwe ọchịchị n'ihi mmekọrịta miri emi ha na ezinụlọ ha, ndị ụkọchukwu obodo na ndị isi obodo. A na-achọta akụkọ banyere obodo ndị a site na inyocha ọnọdụ ndị a, na-enye nghọta ọhụrụ bara uru banyere ahụmịhe ụmụ nwanyị "na ala" nke na-abawanye ọgaranya ma na-agbaghakarị akụkọ banyere nna ukwu akụkọ banyere akụkọ ntolite nke ụka. Beguine akụkọ ihe mere eme, na-egosiputa ọtụtụ ụzọ dị iche iche ụmụ nwanyị, ma akara na njikọta nke ụmụ nwanyị dị ndụ, nọ n'etiti asọmpi nwoke maka ikike ọchịchị.
Foto 1: Jeanne Brichard, nwanyị nwe beguinage nke Paris (d. 1312). Gazette nke Ọma Arts, Isi nke 84.
Foto 2: Beguine, si Des dodes dantz, bipụtara na Lübeck na 1489.
Foto 3: Beguine mgbe ọ na-aga ụka, Johann Friedrich Schannat, Beguine d'Anvers, sur l'origine et le progrès de son Institut. Paris, Girard, 1731.
Foto 4: St. Begga, Joseph Geldolph Ryckel, Vita S. Beggae ducissae Brabantiae, (Leuven, 1631).
Foto 5: Marcella Pattyn, onye ikpeazụ Beguine, d. 2013.
Foto 6: Béguinage nke St Elisabeth, Kortrijk.
Foto 7: Marguerite Porete, d. Ogbe 1310.
Foto 8: Beguines na-arụ ọrụ na aghụghọ na Ghent, Belgium, c. 1910.
Bailey, Michael D. 2003. Ndị mmụọ ọjọọ na-alụ ọgụ: Amoosu, Herejụ okwukwe, na Mgbanwe na Oge Ikpeazụ. Mahadum University, PA: Penn State University Press.
Böhringer, Letha, Jennifer Kolpacoff Deane, na Hildo van Engen, eds. 2014. Ulo oru na aha ogwu: ingkpọ aha Beguines na Northern Medieval Europe. Agbanye: Brepols.
Caciola, Nancy. 2003. Mmụọ Nghọta: Ọchịchị Chineke na Mmụọ Ọjọọ na Mgbe geswa Na-emepechabeghị Anya. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Coakley, John W. 2006. Mụ nwanyị, Menmụ nwoke, na Ike Ime Mmụọ: Ndị Smụ nwanyị na Ndị Nwoke Ha. New York: Ụlọ ọrụ University Press.
Davis, Adam. 2019. Ego nke Medieval nke Nzọpụta: Obi ebere, Azụmaahịa na ịrị elu nke Hospitallọ Ọgwụ. Ithaca, NY: Cornell University Press.
De Moor, Tine. 2014. “Na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, nchebe, na nwute? Kọwa Usoro Mgbasa Ọsọ Oge Ọhụrụ Na Mba Ndị Dị Ala. ” Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ 39: 3-21.
Deane, Jennifer Kolpacoff. 2008. "Beguines Reonsidered: Historiographical Nsogbu na Nduzi Ọhụrụ," Matrik ndị mọnk, Commentaria 3461. Nweta site na http://monasticmatrix.org/commentaria/article.php?textId=3461 na 4 September 2020.
Deane, Jennifer Kolpacoff. 2016. "Elastic Institutions: Beguine Communities na Early Modern Germany." Pp. 175-195 na Devout Laywomen na Modernwa Oge Oge, nke Alison Weber dezigharịrị. London: Ntughari.
Deane, Jennifer Kolpacoff. 2014. "Site Ileba Studies na Comparative elsdị: Würzburg Beguines na Vienne Iwu." Pp. 53-82 n'ime Ulo oru na aha ogwu: ingkpọ aha Beguines na Northern Medieval Europe, nke Letha Böhringer, Jennifer Kolpacoff Deane, na Hildo van Engen dere. Turnhout: Brepols.
Deane, Jennifer Kolpacoff. 2013. “Beguines Nwere Nsogbu Mbubreyo-Oge Ochie? Moddị akụkọ ihe mere eme na Historiographical Martyrs. ” Womenmụ nwanyị Oge Mbụ 8: 275-88.
Dor, Juliette, Lesley Johnson, na Jocelyn Wogan-Browne, ndị ọzọ. 1999. Tredị Ọhụrụ na Nwanyị Ime Mmụọ: Womenmụ nwanyị Dị Nsọ nke Liège na Ha Mmetụta. Agbanye: Brepols.
Elliott, Dyan. 2004. Nwanyị Na-egosi: Nwanyị Ime Mmụọ na Omenala Omenala na Ages. Princeton, NJ: Mahadum Princeton University.
Ubi, Sean L. 2012. Beguine, Angel na Onye Nchọpụta: Ọnwụnwa nke Marguerite Porete na Guiard nke Cressonessart. Notre Dame, IN: Mahadum nke Notre Dame Press.
Galloway, Penelope. 1998. “Mbido, Mmepe na Mkpa Ọbara nke Obodo Beguine dị na Douai na Lille, 1200–1500.” Ph.D. Ntughari. Mahadum nke Oxford.
Grundmann, Herbert. 1995. Mmeghari Okpukpe na Oge Akara: Njikọ akụkọ ihe mere eme n'etiti Heresy, Iwu Mendicant, na Religmụ nwanyị Okpukpe na nke iri na abụọ na nke iri na atọ, na ntọala nke akụkọ ihe mere eme nke German Mysticism. Sụgharịrị site na Steven Rowan. Notre Dame, IN: Mahadum nke Notre Dame Press.
Kieckhefer, Richard. 1979. Mgbagha nke syjụ Ohi na Medieval Germany. Philadelphia: Mahadum nke Pennsylvania Press.
Lerner, Robert. 1972. Sygha nke mmụọ efu. Notre Dame, IN: Mahadum nke Notre Dame Press.
Makowski, Elizabeth. 2005. “Ortdị Nwanyị Dị ernjọ ”: Quasi-Womenmụ nwanyị na Canon Ndị ọka iwu na oge ochie. Washington, DC: Mahadum Katọlik nke America Press.
McDonnell, Ernest W. 1954 Ndị Beguines na Beghards na Culture Medieval: Na-emesi Mmetụta Pụrụ Iche na Ọnọdụ Belgium. New Brunswick, NJ: Mahadum Rutgers.
Miller, Tanya Stabler. 2014. Beguines nke Medieval Paris: Okike, Nlekọta, na Ikike Ime Mmụọ. Philadelphia: Mahadum nke Pennsylvania Press.
Miller, Tanya Stabler. 2007. “Gịnị Bụ n'Aha? Ndị nnọchiteanya ndị ụkọchukwu nke Parisian Beguines (1200-1328). Akwụkwọ akụkọ nke Medieval History 33: 60-86.
Moran, Sarah Joan. 2018. "Womenmụ nwanyị nọ na-arụ ọrụ: Ọchịchị na Nchịkwa Ego na Belọikpe Beguinages nke Southern Low Countries na narị afọ nke iri na asaa na nke iri na asatọ." Akwụkwọ akụkọ mbụ nke akụkọ ihe mere eme 22: 67-95.
Moran, Sarah Joan. 2010. "Womenmụ nwanyị na-enweghị atụ: Okpukpe, Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị, na Foto na Belọikpe Iwu, 1585-1713." Ph.D. Nkọwa, Mahadum Brown.
Ọzọ, Alison. 2018. Iwu fictive na njirimara okpukpe nke ụmụ nwanyị, 1200-1600. New York: Oxford University Press.
Rapley, Elizabeth. 1990. Ndokwa. Womenmụ nwanyị na ụka na narị afọ nke iri na asaa na France. Montréal: Mahadum McGill-Queen's Press.
Simons, Walter. 2001. Obodo nke iesmụ nwanyị: Obodo Beguine na mba ndị dị ala, 1200-1565. Philadelphia: Mahadum nke Pennsylvania Press.
Van Engen, John. 2008. Smụnna nwanyị na Brothersmụnna nke Ndụ Ndị Dị Ndụ: The Devotio Moderna na ofwa nke Oge Ikpeazụ. Philadelphia: Mahadum nke Pennsylvania Press.
Van Engen, John. 2013. "Marguerite (Porete) nke Hainaut na Medieval Low Mba." Pp. 25-68 na Marguerite Porete et le Miroir des Simples Âmes: Echiche nke akụkọ ihe mere eme, Philosophiques et Littéraires, enke Sean L. Field, Robert E. Lerner, na Sylvain Piron dere. Paris: Vrin.
Ziegler, Joanna E. 1987. "Curtis Beguinages na Southern Low Countries na Art Patronage: Nkọwa na Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme." Akwụkwọ akụkọ de l'Institut historique belge de Rome 57: 31-70.
AJỤRỤ AKWỤKWỌ NDỊ
"Ọchịchị, Marcella Pattyn." 2013. The Economist, Eprel 27. Nweta site na https://www.economist.com/obituary/2013/04/27/marcella-pattyn na 4 September 2020.
Flemish Béguinages. Ebe UNESCO World Heritage Center. Nweta site na https://whc.unesco.org/en/list/855/ na 10 August 020.
Ụbọchị Mgbasa Ozi:
Ọgba aghara, Iowa (TM Enclave)
Saint Julian nke Norwich
Glastonbury Okpukpe Chineke
Sunburst (Brothermụnna Sun)
Nzukọ nke Essene nke Kraist
Judith Tyberg kwuru
NKWUKWU NDUM NA-EME
"Site na Rodnoverie ruo Islam: Obere okpukpe na Russia nke Oge a"
Ajụjụ ọnụ Dr Kaarina Aitamurto
"Scientology, Anti-Cultists, na Ọkà Mmụta" (Ajụjụ ọnụ nke Bernadette Rigal-Cellard)
“Okpukpe Ndị ọgọ mmụọ, Omenala Celt, na Ithell Colquhoun”
(Ajụjụ ọnụ nke Amy Hale)
"Site na Thelma na Santa Muerte." (Ajụjụ ọnụ nke Manon Hedenborg White)
"Heathenry na United States." (Ajụjụ ọnụ Jennifer Snook gbara)
“Nzube E Ji Nzube, Gnostic, na Nnyocha Pụrụ Iche nke Okpukpe.” (Ajụjụ ọnụ David Robertson gbara)
Vidio Na-adịbeghị anya
"The Waco Branch Davidian Tragedy: Gịnị ka anyị mụtara ma ọ bụ na anyị amụghị?" J. Phillip Arnold (Onye Mmepụta), Minji Lee (Director)
Onye Nkebi nke Nkiri
Fairfield, Iowa (Ntụgharị Uche Mgbasa Ozi Transcendental)
2021. Ikike nke profaịlụ dịịrị ndị dere ya.